Mareykanka oo soo dhoweeyey jawaata WFP ee Venezuela
Warbixintani waa Faallo ka turjumaysa aragtida dawladda Maraykanka.
In ka badan tobankii sano ee la soo dhaafay Maamul xumo iyo Musuqmaasuq uu ku jiray xukunka aan sharciga ku dhisnayn ee uu hogaamiyo Nicolás Maduro, dalka Venezuela wuxuu ku keenay dhibaatooyin dhaqaale iyo baahiyihii aas aasiga ahaa oo la waayay sida raashinka daruuriga ah iyo dawooyinka.
Gaar ahaan nafaqo darrada carruurta yar yar ayaa kor u sii kacday markii dhaqaaluhu sii xumaaday, xataa adeegyadii aas aasige ahaa ayaa noqday kuwo aan la gon karayn amaba qiimohoodu gaadhay meeshii abid uga saraysan.
Sanadkii 2019 kii warbixin ay soo saartay haayadda qaramada midoobay u qaabilsan cuntada ee WFP yaa sheegtay in 9.3 million oo qof oo reer Venezuela ah oo ka mid ah 28 million qof ee waddankaasi ku nool, ay la daalaa-dhacayeen cunto yaraan soo food saartay, geesta galena warbixin ay soo saartay haayadda Caritas, 14 boqolkiiba ciyaalka ku noon xaafadaha saboolka ah ayaa qabay nafaqo darro heerkeedu sarreeyo.
Dawladda Maraykanka ayaa soo dhawaysay baaqii April 19 keedii, ee heshiiska ay haayadda WFP, la gashay maamulka Maduro, inuu ogolaado in Cunto ama kaalmo bani-aademinimo la gaadhsiyo carruurta yar yar ee baahan.
Barnaamijkan WFP, ayaa raashin siin doona carruurta yar yar ee aadka u nugul gaar ahaan kawa da’doodu u dhexayso sanad jira hila 6 jira, hila kuwa dhigta dugsiyada dawladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay, meelaha sida gaarka ah lo gaadhsiinayo laxa ka mid ah dugsiyada carruurta yar yari tagaan intaanay bilaabin fasalka koowaad iyo kuwa wax logo dhigo ardayda baahiyaha gaarka ah qaba.
WFP, waxay rajaynaysaa in ay raashinka gayso dalkaasi bisha July ee soo socota, waxana qorshaha ugu jirta inay raashin siiyaan 185,000 oo carruur ah marka la gaadho dhamaadka sanadkan 2021 ka.
Taasi oo ay dheertahay tiradaasi oo noqonaysa 850,000 oo arday in cunto la siiyo markuu dhamaado sanad dugsiyeedka 2021-2022.
Iyadoo qorshaha ugh waynina yahay in la quudiyo 1.5 Million oo Carruur ah markuu dhamaado sanad dugsiyeedka 2022-2023.
Maraykanka oo ah dawladda kaliya uguna wayn ee kaalmaysa dalka Venezuela intii dhibaatooyinku ka jireen ayaa waaxda arrimaha dibadda Maraykanka iyo hayadda USAID oo iskaashanaya ay siiyeen in ka badan $1 billion, oo loogu talo galay gargarea degdega ah ee bani aademinimo si wax looga qabto dhibaatada ay ku jiraan dadka ku nool gudaha wadanka Venezuela iyo kuwa ku dayacan wadamda kale ee ku yaala Latin America iyo Caribbean ka, sida qoxootiga ku sugan wadamda Brazil, Colombia, Ecuador, Peru, ibo wadamo kale oo gobolkaasi ku yaala.
Dawladda Maraykanka ayaa soo dhawaysay hindisaha ay dhigtay haayadda WFP, ee ah hawlgalka bani aademinimo ee wax lagaga qabanayo xaaladda dalasi Venezuela, waxaanu maraykanku ka Xun yahay xaaladda dhaqaale iyo siyaasadeed ee sii xumaanaya wadankaasi Venezuela, waxaanay dawladda maraykanku ku adkaysay Mr. Maduro in uu haayadaha samafalka oo ay WFP ka mid tahay u ogolaado galkanaal buuxa gudaha dalkaasi.